आर्यन ‘डिसेम्बर फल्स’ लिएर सुटिङमा निस्किए - नेपालबहस
आर्यन ‘डिसेम्बर फल्स’ लिएर सुटिङमा निस्किए
| १३:३२:५९ मा प्रकाशित
७ माघ, काठमाडौं । काेराेना भाइरसकाे महामारीपछि हल खुलेसँगै सुटिङमा आधा दर्जन फिल्म निस्किएका छन् । माघ लागेसँगै धमाधम सुटिङ भैइरहेको छ। सरकारले हल खोल्ने अनुमति दिएसँगै दोधारमा रहेका निर्माता फिल्म क्षेत्र पहिलेकै लयमा फर्कने अनुमानसहित मैदानमा फर्किएका हुन् ।
यतिबेला आधा दर्जनभन्दा बढी फिल्म फ्लोरमा छन् । यसमध्ये केही फिल्म भने पहिलेको रहल पहल सुटिङ सक्न पनि सुटिङमा निस्किएका छन् । एउटा भरपर्दो हिटको खोजीमा रहेका आर्यन सिग्देल ‘डिसेम्बर फल्स’ लिएर सुटिङमा निस्किएका छन् । उनले गत सोमबार पोखराको विन्ध्यवासिनीमा पूजा गर्दै सुटिङ थालेका हुन् ।
चलचित्रमा आर्यन सिग्देल, उपासना सिंह ठकुरी, सलोन बस्नेत,शिवहरि पौडेल, दयाराम दाहाल र नरेश भट्टराई लगायतको अभिनय रहने छ । प्रेम कथामाथि आधारित यो चलचित्रलाई प्रविन झाले निर्देशन गर्ने छन भने छायाकार महेश आर गुप्ता हुन । यी दुवै भारतीय चलचित्रमा काम गरिसकेका प्राविधिक हुन । लक्ष्मण रिजाल कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा रामप्रसाद रिजाल र राजकुमार भट्ट निर्माता हुन् ।
यस्तै ‘हिजो आजका कुरा’ रिलिजको पर्खाइमा रहेकी ऋचा शर्मा यतिबेला ‘कमेडी च्याम्पियन’मा निर्णायकको कुर्सीमा रहेर कमेडियन छानिरहेकी छिन् । यही समयमा ऋचा आफूले निर्माण गरेको फिल्म ‘कौसीद’को सुटिङ गरिरहेकी छिन् । आमाको वर्ष दिनको कामका कारण आफू ब्रेकमा रहे पनि उनले फिल्मको सुटिङ मेलम्चीमा भइरहेको जानकारी गराइन् । ऋचाले यो फिल्मको सुटिङ २० दिनमा सक्ने लक्ष्य राखेकी छिन् । भोला सिलवाल र ऋचाको मुख्य भूमिका रहेको यो फिल्म माघ १ देखि फ्लोरमा गएको हो ।
यस्तै यतिबेला ‘तिम्रो मेरो साथ’को सुटिङ पनि धमाधम भइरहेको छ । ‘रेड वाइन’बाट नाम परिवर्तन गरेर ‘तिम्रो मेरो साथ’ बनेको यो फिल्मको काठमाडौंका विभिन्न लोकेसनमा सुटिङ भइरहेको छ । कलाकार तथा प्राविधिकलाई निर्माण टिमले होटलमै राखेर स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीसहित सुटिङ गराइरहेको छ । रमेश एमके पौडेलको निर्देशन रहेको फिल्ममा पुष्प खड्का र साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाहको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
अर्को आकाश श्रेष्ठ र रेखा शाहको मुख्य भूमिका रहेको ‘हिड्दा हिँड्दै’को पनि काठमाडौंमा धमाधम सुटिङ भइरहेको छ । सलोन बस्नेतसमेत महत्वपूर्ण भूमिकामा अभिनय गरिरहेको यो फिल्म काठमाडौंको सेड्युल सकाएर उदयपुर जाने योजनामा छ । फिल्मलाई मिलन आले मगरले निर्देशन गरिरहेका छन् ।
दसैँअघि नै फ्लोरमा गएर पनि काम नसकिएका फिल्म पनि यतिबेला फ्लोरमा छन् । जस्तो ‘आइ एम ट्वान्टी वान’को सुटिङ दसैँ अघि नै सुरु भएको थियो । तर, दसैँ तिहार र जाडो बारेको फिल्म अन्तिम सेड्युलका लागि फ्लोरमा निस्किएको छ । फिल्मको यतिबेला पाटनमा सुटिङ भइरहेको छ । रेनशा बान्तवा राईको निर्देशन रहेको फिल्ममा धिरज मगर र जसिता गुरुङको अभिनय छ ।
‘आइ एम ट्वान्टी वान’जस्तै ‘परदेशी २’को पनि बाँकी भागको सुटिङ भइरहेको छ । यो नारायण रायमाझीको निर्देशन रहेको फिल्ममा प्रशान्त तामाङ, प्रकाश सपुत केकी अधिकारी र वर्षा सिवाकोटीको अभिनय रहेको छ । फागुनदेखि जेठ अन्तिमसम्मको समय निर्माताले सुटिङका लागि रुचाउने समय हो । यसबेला सुटिङ भएका फिल्म साउनदेखि दसैँतिहारको समयमा रिलिज हुन्छन् ।
संघीय संसदका सदस्यहरुले बुधबार खोप लगाउने २३ घण्टा पहिले
सरकारले दीर्घरोगी र अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै पुगेर खोप लगाउने २ दिन पहिले
भाेली पाँचौं संस्करणको ‘र्याली अफ होप’ हुँदै, विश्व नेताहरुले सम्बोधन गर्ने ३ दिन पहिले
पहिलो चरणमा चार लाख २९ हजारले लगाए खोप ६ दिन पहिले
बिएण्डसी कलेज सम्बन्धनमा हस्तक्षेप भएको भनी आपत्ति ६ मिनेट पहिले
बिएण्डसी कलेज सम्बन्धनमा सरकारको हस्तक्षेपप्रति आपत्ति २१ मिनेट पहिले
चन्द्रागिरी हिल्सको शेयरको उच्च माग, कति पुग्यो प्रतिशेयरमूल्य ? २३ मिनेट पहिले
विप्लवले पनि गठन गर्यो प्रवक्ता प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता गठन २५ मिनेट पहिले
चितुवाको आक्रमणबाट बचाउन मोबाइलमा अलर्ट म्यासेज २९ मिनेट पहिले
पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको ओलीले गरे उदघाटन ३१ मिनेट पहिले
अपहरणमा परेका नाइजेरियाका २७९ छात्रा रिहा ३५ मिनेट पहिले
ताप्लेजुङको दोभान बजारमा भीषण आगलागी हुँदा ५० घर जले ३५ मिनेट पहिले
लगत सङ्कलन गर्न भूमिआयोगको एकाइ कार्यालय स्थापना ४१ मिनेट पहिले
यो वर्ष जूमले ३ अर्ब ७० करोड डलर आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण ४७ मिनेट पहिले
गाडीमा रहेको ८ लाख सडकमै फ्याँकेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष फरार ! ५२ मिनेट पहिले
किसान लक्षीत जीओ कृषि एप सञ्चालनमा २३ घण्टा पहिले
बागलुङको विकट गाउँमा विद्युत पुगेपछि स्थानीयवासी हर्षित २३ घण्टा पहिले
सिनो हाइड्रो र मजदूरबीच विवाद समाधान, अवरुद्ध काम शुरु २३ घण्टा पहिले
दुई वर्षपछि पुन सञ्चालनमा जामाखोला जलविद्युत् आयोजना २४ घण्टा पहिले
काठमाडौंमा संचालित टेम्पोमा मेगा बैंकको क्यूआर कोड संचालनमा २३ घण्टा पहिले
मदिरा भनेर सेनिटाइजर सेवन गर्दा एकैदिन दुई जनाको मृत्यु २१ घण्टा पहिले
सर्वोच्चमा अबेरसम्म न्यायाधीशहरु छलफलमा, सुरक्षा व्यवस्था कडा ७ दिन पहिले
शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरूवा हुन मिल्ने बाटो खुल्याे २ दिन पहिले
पोप फ्रान्सिस शुक्रबार इराकको भ्रमणमा जाने २४ घण्टा पहिले
एक अनाथ बालिकालाई बलात्कारको प्रयास गर्ने आरोपी पक्राउ २ दिन पहिले
मन्त्रालयले भन्यो चिकित्सक परामर्श शुल्क वृद्धिमा कुनै निर्णय भएको छैन् २ हप्ता पहिले
नेप्सेमा सात कम्पनीको १ करोड २० लाख कित्ता शेयर सूचीकृत, कुनको कति कित्ता ? २ हप्ता पहिले
पदाधिकारीलाई काम गर्न नदिन माग गर्दै रिट दायर ४ हप्ता पहिले
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयरमूल्य ९.८६ प्रतिशतले बढ्यो, कति पुग्यो प्रतिशेयरमूल्य ? २ हप्ता पहिले
नेपाली सेना हवाईमार्गबाट ३७ टन स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदै १० महिना पहिले
प्रदेशसभा बैठकः असिनापानीबाट भएको क्षतिकोे क्षतिपूर्ति माग ११ महिना पहिले
‘डिसेम्बर फल्स’ मा जम्ला त आर्यन र उपासनाको जोडी ! ३ महिना पहिले
तेलको प्याकेटमा कुहिएका कीरा र मुसाजस्तो वस्तु भेटिएपछि बिक्रीवितरणमा रोक ५ महिना पहिले